Intsingiselo yeVenus kwiAstrology - Malunga Inkwenkwezi
Intsingiselo yeVenus kwiAstrology
Yintoni oyithandayo kwaye uyixabisile kwabanye? Luhlobo luni lolwalamano olunomdla kuwe? Usondela njani kubudlelwane? Unika njani kwaye ufumana njani uthando? Yintoni ekuzisela uvuyo nolonwabo? Iplanethi yeVenus kwitshathi yakho yokuzalwa inempendulo kule mibuzo.
IVenus: Iplanethi yothando neMali
IVenus yimvakalelo yakho yobuhle, uyolo lwakho lokonwaba, ulwazi ngobuhle, uthando lwemvisiswano, intlalontle, inkanuko yesimo sengqondo, kunye nesimo sakho sengqondo ngothando, imali, izinto onazo kunye nokuzonwabisa. IVenus kukukwazi kwakho ukubonisa uthando, kunye nokutsala kunye nokuxabisa izinto zehlabathi, nokuba zikwimvakalelo, zomzimba / eziphathekayo, ezengqondo, okanye ezomoya.
I-Venus kwi-Aries Intsingiselo kunye noMqondiso uchaziwe
IVenus kwiNtsingiselo yeVirgo kunye noBuntu
UVenus kwiNtsingiselo yeGemini kunye neempawu zoMqondiso
Amacala amabini eVenus
UVenus ngumlawuli weplanethi yeTaurus kunye neLibra:
indlela yokufumana amabala ekofi ekhaphethini
Njengomlawuli weTaurus, ungumhlaba, unokwenyama, ucebile, kwaye unomdla wokuzithanda kunye nokuzonwabisa.
Njengomlawuli weLibra,uyathandana, ezobukrelekrele, ezentlalo, ezichaphazelekayo ngokulunga, kunye nokudalaubudlelwane obonwabisayo obuhambelanayonabanye.
UVenus ulawula izindlu ze-2 kunye ne-7:
Njengomphathi wendlu yesi-2, uVenus unomdla kumaxabiso obuqu, ukuzixabisa,ubuwena, impahla, imali, ubutyebi kunye nokubhiyozela intabalala yezinto eziphathekayo.
Njengomphathi wendlu yesi-7 uVenus ujongene nomtshato kwaye uzibophezele kubuqabane obuhlala ixesha elide kuzo zonke iintlobo; Umlingane, iqabane elithandanayo, iqabane lishishini okanye notshaba olwaziwayo
IVenus kunye nokuhambelana
UVenus ngumdlali ophambili kubudlelwane beenkwenkwezi. IVenus yinto enomtsalane ekuhendela ekubeni ube nolwalamano lothando. Xa iVenus yakhouphawu iyahambelananabathandi bakho, nabelana ngamaxabiso afanayo, kukho ukudibana omnye nomnye, kunye nomnqweno wokuchitha ixesha kwaye nonwabele ubomi kunye. Ukuba isibini sitshatile, ukungqinelana kwabo kweVenus kuzisa ubuhlobo obunokugcina umtshato njengoko inkanuko yesini iyehla kwaye inyibilika. Unxibelelwano oluhambelana neVenus lunokuba sisitshixo kulonwabo kubudlelwane bexesha elide.
Iimpawu zeuphawu lweenkwenkweziukuhlala kwakho kweVenus kutyhila into oyithandayo kwaye uyixabise ngawe, kwaye ufuna ukuba abanye bayonwabele kwaye bayayixabisa ngawe. Ukubekwa uphawu kweVenus kwitshathi yakho yokuzalwa kukuxelela, ngokuchanekileyo ngakumbi kunokwakhoUmqondiso welanga,Uphawu lwenyanga, okanyeUmqondiso wokunyuka, into oyikhangelayo kubudlelwane. Qaphela: ukuba awuyazi imiqondiso yeVenus yakho, faka umhla wokuzalwa kunye nonyaka kumyili wetshathi yokuzalwa e Ukufuna i-Astro.
Abo baneVenus kwiiAries bonwabele ukusukelwa. Bangabantu abafuna ukonwaba abakuxabisayo ukukwazi kwabo ukulandela, balwele kwaye boyise into kwaye banqwenela ntoni. Babalasele ekuqaliseni uthando kodwa kungalunganga ukugcina omnye. Olona lwalamano luvisisanayo luya kuba kunye nomntu onomtsalane kushushu kwaye okuneziqholo, anokunika kangangoko anako, kwaye angakhathazeki kakhulu ngonaphakade.
Abo baneVenus eTaurus banesidima kwaye bakhulu ekuphumleni kwaye bangenzi nto. Bayacotha ukunika ukuthanda kwabo, kodwa nje ukuba benjenjalo, banamathela njengeglu. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba nomntu olungileyo, ozolileyo, kwaye 'othambileyo.' Umntu owonwabisayo, othobayo, kwaye ubanika izipho galore.
Ingqondo yabo kunokuba umzimba wabo ulawule abo baneVenus eGemini. Ziyabhabha, ziyatshintsha, ziyajika, ziyavutha, kwaye ziyathanda ukugcina ubudlelwane bazo bukhanya. Olona lwalamano luvisisanayo luyakuba kunye nomntu othethayo emameleyo, uzenzekelayo, unobundlobongela, kwaye uyonwabisa, kodwa uya kubanika indawo eninzi yokugungqa.
UVenus useCancer unqwenela ubudlelwane obuzinikeleyo kunye noqikelelekayo. Uthando abalunikayo lungaphezulu koomama kunokuthandana. Aba bantu banxiba iintliziyo zabo kwimikhono yabo kwaye banokuba nemoody, kodwa banesakhono esikhulu sothando kwaye basondele ngokweemvakalelo, banovakalelo kwaye banemvakalelo. Olona lwalamano luvisisanayo luyakuba kunye nomntu othabatha ixesha labo, enobulali kwaye ecingayo, kwaye ubenza bazive besekhaya xa bekunye.
UVenus kuLeo ujonge umdlalo wokudlala kunye nobomi bothando. Banomdla, banomdla, bayathandana kwaye bayathandana, kwaye banomdla kubantu ababalabala. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba nomntu obenza bazive bekhetheke ngokukodwa, banomtsalane kwaye bayathandwa, bobabini ngamazwi amakhulu endumiso kunye nezimbo zothando.
UVenus eVirgo ujonge iqabane 'eligqibeleleyo'. Bacalucalula kakhulu kwaye bachaphazela kakhulu umntu abakhethayo kuye. Kubudlelwane bothando, bafuna ukukhonza kwaye babe luncedo kumaqabane abo. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba nomntu onxibe kakuhle, osoloko eziphethe kakuhle, onaka yonke into encinci abenzela yona, kwaye uyakhawuleza ukubonisa uxabiso.
UVenus eLibra uyinyani yothando olonwabileyo xa edibene nomntu. Banomdla wothando kunye nothando, banobuhlobo, banomtsalane, banxibe kakuhle kwaye bahlala bejonge ukutsala umdla. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba kunye nomntu omhle okanye omhle, onobuchule be-esthetic, okrelekrele, othetha kakuhle, onesimilo kwaye onxibe kakuhle.
UVenus eScorpio ujonge ubunzulu bokunxibelelana komphefumlo kunye nokuzibophelela ngokupheleleyo kubudlelwane. Banamandla kwaye banomnqweno wokudibana neqabane labo, oko kuthetha ukuba isondo lidlala indima enkulu kubomi babo bothando. Bafuna ukuguqulwa nokuzalwa ngokutsha kubudlelwane bezothando. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba lolunye unxibelelwano olunzulu ngokwesondo kunye neemvakalelo.
Umatshini wokuthunga we-antique uyathengiswa
Abo baneVenus kwiSagittarius bajonge ukukhula nokwandisa uluhlu lwabo lwamava. Banomdla, bahlekisa, baqonde phambili kwaye bathembekile. Kubudlelwane bothando, Olona lwalamano luvisisanayo luya kuba kunye nomntu onokubanika amava amatsha, anomdla kwaye azele bubomi, unomdla kwaye unesisa kuthando lwabo, kodwa akufuneki ukuzibophelela okuninzi.
IVenus kwixabiso leCapricorn ngokuxelwa kwangaphambili, uzinzo kunye nokuzinikela kwabanye. Bathatha uthando ngokungathandabuzekiyo, kwaye abayi kuthi gxobhozo ekuthandaneni de bazi de kube kulungile. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba nomntu osebenza nzima, onobuchule, ophumeleleyo, oqeqeshiweyo noqeqeshekileyo.
I-Venus kwi-Aquarius ixabisa ubudlelwane obungahambelaniyo kunye nobuhlobo obuvulekileyo abayilandeli imigaqo 'yesiqhelo' yothando. Bathandwa kakhulu kodwa banabahlobo abambalwa abasondeleyo. Olona lwalamano luvisisanayo luya kuba nomntu ojolise kubo ohambelana nabo ngokwasengqondweni, unokuba ngumhlobo wabo osenyongweni kwaye akabophelelwanga kulwalamano.
IVenus kwiPisces ixabisa uthando kunye nothando. Bathandana ngokungaqhelekanga kwaye bathanda ngokungathandabuzekiyo. Olona lwalamano luhambelanayo luya kuba nomntu onemfesane, onobulali, onobuntununtunu, onothando, obonisa uthando nothanda uburharha kwaye angakwazi ukumelana namahla ndenyuka.
IVenus kwitshathi yokuzalwa yomntu okanye yowasetyhini
Kucacile ukuba kwi-21st Century amadoda amancinci aye akhululeka ngakumbi ngamandla abo eVenusian ( yeyiphi ), kodwa kuninzi lweetshathi zokuzalwa oko uVenus kuthetha ukuba yindoda nebhinqa kwahluke kancinci. Kwitshathi yokuzalwa komntu uVenus bubufazi bakhe obuqikelelweyo, kwaye yintoni ayikhangela kumfazi wakhe okanye iqabane lakhe elifanelekileyo. Kwitshathi yabasetyhini, yindlela abenza ngayo ubufazi bakhe kwihlabathi labanye.
UVenus 'uNcedo oluncinci'
UJupiter 'ngowona unenzuzo enkulu' kwaye uVenus yiplanethi yeenkwenkwezi 'encinci'. Naphi na apho uVenus ekwitshathi yakho yokuzalwa, uthathwa njengempembelelo entle. Kukho enye into malunga neVenus onokufuna ukuyazi: Ukubekwa kweVenus kwitshathi yakho yokuzalwa kulapho unokufumana imali kunye nokufumana izinto eziphathekayo.
Ephakamileyo Isithende Izihlangu Malunga Origami Ubuhle Product Iingxelo Kwakhona Gluten Ukuziva Ubambiso Ukubuyiselwa Kwemali
uyihlambulula njani i-dvd
ubudala obunjani obuthathwa njengomdala
yintoni eyeshadow ehamba namehlo aluhlaza
njani ukumelana noqhawulo mtshato xa usamthanda